Global Voices teny Malagasy · avylavitra – Marsa 2013
avylavitra · Marsa, 2013
Septambra 2015 30 Lahatsoratra
Editor/Translator for Lingua Malagasy · Nanomboka nandika tamin'ny 10 Marsa 2008 · 2465 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Marsa, 2013
08 Marsa 2013
Maduro Sy Capriles No Hamaritra Ny Hoavy Ara-Politikan'i Venezoela
Mpanoratra Jessica Carrillo · Amerika Latina
Tsy azo antoka ny hoavin'i Venezoela taorian'ny nahafatesan'i Hugo Chávez. Betsaka ny kisary sy ny mety ho fandehany azo sainina fa hanomboka hiseho, saingy efa ela kosa ny habaka no niady hevitra sy niresaka mikasika azy ireny.
06 Marsa 2013
Ekoatora: Tezitra Noho Ny Fahatapahan'ny Famatsian-drano Ny Mponina Ao Loja
Mpanoratra Gina Yauri · Amerika Latina
Anaty fepetra amin'ny tany misahotaka ny faritanin'i Loja amin'izao fotoana izao: efa ho herinandro iray mahery, tanàna mpifanilo-bodirindrina efa ho 60 mahery no tsy manana rano madio fisotro, noho ny olana mianjady amin'ny fantsona goavana famatsiana rano. Naneho ny tsy hafaliany mikasika azy io sy ireo olana hafa any amin'ny...
Venezoela: Nodimandry i Hugo Chávez
Mpanoratra Luis Carlos Diaz · Amerika Latina
Io hariva io (05/03/2013), no nambaran'i Nicolás Maduro, filoha lefitra, ny fodiamandrin'ny filohan'i Venezoela, Hugo Chávez Frías. Avy hatrany dia naneho hevitra tamin'ilay fanambaràn'i Maduro ireo mpampiasa Twitter.
Tondraka Keniana Ny Birao Fandatsaham-bato Na Nisy Herisetra Aza Ny Andro Nifidianana
Nahalatsaka ain'olona 13 raha kely tao Kenya ireo mpitaky fizakan-tena nirongo antsy lavalela raha an-tapitrisa kosa ireo olona nirohotra marobe teo amin'ny tantara mba handrotsaka ny vaton'izy ireo tamin'ny 4 Martsa 2013 nandritra ny fifidianana solombavambahoaka iray izay tena nobanjinina tokoa taty Afrika hatramin'ireo fifidianana tamin'ny 2007 niafara tamin'ny fifandatsahan-drà...
05 Marsa 2013
Tosika Orogoaiana Hisian'ny Fitaterana Maharitra
Mpanoratra Lucia Terra · Amerika Latina
Manangona sonia 10.000 ireo teratany Orogoaina mba hanerena ny governemantan-dry zareo hanolotra fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny hisian'ny fitaterana maharitra, manomboka amin'ny faritra natokana ho an'ny bisikilety. Kendrena amin'ity fandraisana andraikitra ity ny handinihana momba ny bisikilety ao anatin'ny drafitra lavitr'ezaka nataon'ny firenena ho toy ny fitaovam-pitaterana maharitra.
Mampirehitra Ny Media Sosialy i Pero Mandritra Ny Fahatapahan'ny Herinaratra
Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe · Amerika Latina
Ny Alahady 3 Martsa 2013, faritra maro tao Lima renivohitra Peroviana no niharan'ny fahatapahana herinaratra tampoka [es]. Nirohotra tao amin'ny tambajotra sosialy ireo Limeana (ilazàna ireo teratany ao Lima), indrindra fa ny Twitter mba hanao izay handrenesana ny feon-dry zareo.
04 Marsa 2013
Kianja Sa Sekoly: Diso Toerana Ny Laharam-Pahamehana Ao Slovakia
Mpanoratra Tibor Blazko · Eoropa Afovoany & Atsinanana
Tsy misy vola ampy hanomezana karama sahazo ho an'ireo Slovaky mpampianatra, saingy misy kosa ny vola hananganana kianja filalaovana baolina kitra manerana ny firenena. Tibor Blazko mitatitra momba ny hadisoan'ny governemanta Slovaky amin'ny laharam-pahamehana amin'ny famatsiam-bola.